Lahatsary YouTube Mampihetsi-po Manome Fitenenana Hoan’ny Olon-tsotra Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2014 1:37 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, čeština , Español, English
Namoaka lahatsary Youtube vaovao ilay mpanatontosa sarimihetsika Ali Molavi izay mametraka fanontaniana iray amin'ny Iraniana 50: Inona no mampatahotra indrindra anao? Nivoaka teny an-dalan'i Tehran i Molavi ary nahazo ny valintenin'ireo Iraniana isan-karazany izay itovizana manerana izao tontolo izao ny valinteny azo tamin'izany, sady mifandraika indrindra amin'ny zavamisy ara-tsosialy, kolontsaina ary politikan'i Iran.
Ireto avy ireo valinteny izay mety itovizana amin'izao tontolo izao toy “ny fikorontanan'ity tontolo ity”, “ny alahelo”, “ny fanirery” ary “Andriamanitra”. Ny valinteny mifandraika amin'ny ao Iran dia “ny olana momba ny ady sy ny nokleary” ary ny “tahotry ny zavamisy fa tsy manandanja ny vehivavy ao Iran.”
Iharan'ny sazy iraisam-pirenena i Iran ankehitriny noho ny tetikasa nokleary. Maro ireo mihevitra fa natao ho ampiasain'ny miaramila ity tetikasa ity. Araka ny voalazan'ny lalàmpanorenana sy ny fehezan-dalàna famaizana Iraniana, dia iharan'ny tsy fitovian-jò maro ny vehivavy Iraniana, izay namelona ny hetsiky ny vehivavy tao amin'ny firenena hatramin'ny talohan'ny Revolisionin'ny 1979.
Mpanatontosa sarimihetsika tsy miankina i Molavi ary mpanentana fandaharana monina ao Iran, efa tamin'ny 26 Febroary 2013 izy no namoaka andianà horonantsary tamin'ny lahatsary YouTube manontany ny Iraniana izay fanirian'izy ireo. Notohizany izany tamin'ny 4 Janoary 2014 tamin'ny lahatsary hafa manontany ny Iraniana izay fahaiza-manao tian'izy ireo ananana.